३.४६ अंक घट्यो नेप्से, कारोबार रकम ४३.६१% बढेर ३४ करोड
भदौ २५, काठमाडौं । बुधवार नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ४६ अंक घटेर १ हजार १६३ दशमलव २१ विन्दुमा आइपुगेको छ । १ हजार १६६ दशमलव ६८ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको पहिलो घण्टामा घटेर १ हजार १६२ दशमलव ६२ विन्दुसम्म आएको थियो । यसपछि उकालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक कारोबारको तेस्रो घण्टाको शुरुआततिर यस दिनकै उच्च विन्दु १ हजार १६८ दशमलव शून्य ६ विन्दुमा पुगेपछि पुनः घट्न थालेको थियो । अन्त्यमा यस दिनको परिसूचक गत कारोबार दिनको तुलनामा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत घटेर बजार बन्द भएको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका १२ समूहमध्ये म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेर बन्द हुँदा समग्र नेप्से परिसूचक घट्न पुगेको हो । यस दिनको कारोबारमा म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ भने सर्वाधिक घटेर कारोबार हुनेमा होटल समूहको परिसूचक १ दशमलव ८ प्रतिशत घटेको छ । निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत घटेको छ । यस्तै, बैंकिङ, व्यापार, विकास बैंक, जलविद्युत्, वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन, ‘अन्य’, लघुवित्त र जीवन बीमा समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा कम घटेको छ ।
बुधवार रू. ३४ करोड १७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ४३ दशमलव ६१ प्रतिशत बढेको हो । गत कारोबार दिन मंगलवार रू. २३ करोड ७९ लाख रकम बराबरको कारोबार भएको थियो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव ७९ अंक घटेर २५४ दशमलव ७८ विन्दुमा बन्द भएको छ ।
शेयरमूल्य बढेर कारोबार हुने अधिकांश कम्पनी जलविद्युत समूहका
बुधवार शेयरमूल्य बढेर कारोबार हुने अधिकांश कम्पनीहरु जलविद्युत समूह अन्तर्गतका रहेका छन् । यद्यपि सो समूहको परिसूचक भने घटेर बन्द भएको छ । यस दिन घलेम्दी हाइड्रो कम्पनीको शेयरमूल्य ४ दशमलव ४१ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्यमा प्रतिकित्ता रू. ३ ले बढेर अन्तिम शेयरमूल्य रू. ७१ पुगेको छ । यस्तै अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेर अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १०३ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, नविल इक्वीटी फन्डको एकाईमूल्य ६ दशमलव ६९ प्रतिशत घटेर प्रतिएकाई रू. ७ दशमलव ५३ मा सिमित भएको छ । लक्ष्मी लघुवित्तको शेयरमूल्यमा भने ५ दशमलव ६९ प्रतिशत घटेर अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६७९ कायम भएको छ ।
यस दिन सोल्टी होटल लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको २ लाख ८ हजार ८६० कित्ता शेयरको खरीद विक्री हुँदा रू. ४ करोड ५५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २१९ कायम रहेको छ । कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रोमा लक्ष्मी बैंकको संस्थापक शेयरको रू. १ करोड ९० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ११४ कायम रहेको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका १७१ कम्पनीमा ४२ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने ९३ कम्पनीको घटेको छ । साथै, ३६ कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ ।
धितोपत्र बजारसम्वन्धि प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित [२०७७ असार, २७]